Isiokwu a na-akpọ “The Texas Chainsaw igbuchapu: ihe nkiri na-emenyekwa m ụjọ kasị” e dere site Xan Brooks, n'ihi na theguardian.com on Monday 27 October 2014 11.01 UTC
Mgbe ọ dị afọ 12 M na-emegide ndị na onye ọrụ ugbo. Onye ọrụ ubi hụrụ anyị dị ka ụmụ ahụhụ na a pụrụ ikwu na ọ bụ nri. Ụbọchị nke ọ bụla mgbe ụlọ akwụkwọ enyi m Carl na m ga-ikpe na ala-ya na ịrị elu na ya n'ọba. Anyị rụrụ n'ogige na hay, atụba ndị Bales na onye ọ bụla ọzọ na nọ na-akpagharị si flushed na ọṅụ si a arụzi. The nleta mbụ bụ oké na-abua bu mma. Ya mere, anyị gaghachiri a atọ oge na nke a bụ mmeghe.
N'akụkụ n'ọba guzo a ihe wụsịrị na a n'akpọ ígwè ọnụ ụzọ. Onye ọrụ ubi zo onwe-ya wụsịrị wee dọwaa azụ ụzọ. Ọ were iwe ọkụ n'ime yad dị ka ụfọdụ yokel berserker; ezé agbabawo, ọkpọ clenched. The soundtrack ndị na sekọnd-arụ ná ntị m, rue ta. The guillotine zing nke bibiri metal ụzọ; na ụjọ Yelp nke nwa na-enweghị n'akụkụ m.
Mgbe a na isi m ga-ahụ n'anya na-akọ na m guzoro na agha dị ka nwoke, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ welie aka m na-ekwu ụzọ m nsogbu. Kama, M jumped n'elu a ụzọ ámá ma gbaa ọsọ site a ubi - n'egbughị oge ahapụ Carl (ejikari nke ukwuu quicker na ndị ọzọ nkọ n'ichepụta ihe karịa m) na-ejide, kụrụ aka ala na roughed enye ke ntụrụndụ. The ọzọ awa ole na ole gafere na a blur nke dị n'azụ uwe ojii, kpọrọ asị nne na nna na ego reparations. Ọjọ-efu na anyị anọwo na-ejide red-agba aka. Anyị na-akwụ ụgwọ si na akpa uwe ego ọnwa ole na ole ma ọ bụ karịa.
Egwu ugbo ... The Texas Chainsaw igbuchapu
E mesịa anyị nkọ ede ihe a merenụ ka a knockabout ntochi - ukwuu nke mere na m bịara kwere na ya. Cheta na-akpa ọchị ihe mere? The oké iwe ọrụ ugbo na ndị slapstick achụ? Ihe a nri ochie ochi anyị nwere na ụbọchị. Mgbe ahụ nile n'otu mgbe m 17, ọkara ịkpụ on Scotch na-ekiri The Texas Chainsaw igbuchapu on a gbazitere VHS. Na otu mgbe ndị ọrụ ugbo akụkọ bụ na-akpa ọchị ọzọ, ọ bụ a zuru-blown egwu nro. Ọ bụ ihe kasị emenye ụjọ m na nwetara na m na e-n'igbochi ya ruo ọtụtụ afọ.
Eduzi Tobe Hooper on a mmefu ego nke $300,000, The Texas Chainsaw igbuchapu bụ ụwa oké rustic egwu film; akụkọ nke a ụyọkọ emeghị ihe ọjọọ ụmụaka na-asụ ngọngọ n'elu a ezinụlọ si-nke-ọrụ slaughtermen, mgbe ahụ e butchered ka ezì, otu mgbe ndị ọzọ. Hooper si film bụ mkpari, adịghị eche echiche na-adịghị, spotlighting a nje nke mmadụ njinji jiri na-ele meworo ochie dị ka ugwu nta. Ke kemgbe ya ntọhapụ, azụ ke ufọt ufọt 1970, The Texas Chainsaw igbuchapu esiwak hụrụ onwe ya touted dị ka atụrụ nke ọ bụla slasher nkiri ndị sochirinụ. A pụrụ inwe ezi n'ókè ọ na-aga, ma ọ ize ndụ kama na-efu nkú nke osisi. I mma ma na-ekwu na ma ọ bụghị na primal Chịa ọ gaghị adị mgbasa ozi jingles.
Mara mma nke ukwuu ihe nile banyere Chainsaw aga n'ihu na-mmenyenjo m. The ime ihe ike bụ indiscriminate; ọ malitere na mberede. Ọ dịghị ihe na jidesienụ, ọ dịghị onye na-akpata n'ihi na, na-emekwa ọ dịghị onye anyị pụrụ ịtụ anya tụgharịa uche. Ọbụna n'anya sunflowers bụ iji nye m akpata oyi. Inside ha mara clapboard ụlọ, na fim na American nnukwu anụ ịnọgide na-enwe a ghastly facade nke nuclear ùgwù. Ha na-a Pita nne okuko na a Canary onu, akpọkọta maka ihe nkịtị ezinụlọ dinners na-eme ka totemic ndiife nkà nke feathers, ọkpụkpụ na eriri. Ma nke a home, crucially, -adịghị tucked efep ke n'oké ọhịa. Ọ na-anọdụ na isi n'okporo ụzọ, ebe gwongworo rumble site. Hooper-egosi anyị na ihe ọjọ bụ banal nakwa na ọ odịbe ke larịị n'anya. Ọ bụ naanị na-eche ka mmadụ mmehie ala na ụlọ ezumezu.
Ihe a nile na pụrụ ịbụ iji mee ka The Texas Chainsaw igbuchapu ọkacha mmasị m (-agụ: kasị emenye egwu) iju-anya film na ha niile. Ma nke ka reckons-enweghị ọcha yiri enyo ụjọ m chere na ịgba àmà nke mbụ igbu ọchụ, mgbe mewling nwoke na nwa Leatherface (Gunnar Hansen) akụrisị nwa ewu ya mallet, adọkpụrụkwa ya n'ime a azụ ụlọ na Rips na metal ọnụ ụzọ mechie. Na ọnu-uzọ anya yiri ka ọnụ ụzọ na wụsịrị. Ụda nke na o mere bụ kpọmkwem otu. Na-ekiri na idaha, nọrọ ọdụ aṅụbiga n'ala, Teenage Me n'ike reconnected-eji Teen Me, tọrọ atọ na yad na odo irighiri ahịhịa nke ntutu m.
Teenage Me, n'ezie, maara na ọ dịghị ihe na-atụ egwu. Anyị onwe version nke Leatherface bụ nanị n'ebe ọdịda anyanwụ mba ọrụ ubi, -ezi ezi ka ọnụma ju site pesky ụmụaka na ala-ya. Ma Nga Teen Me rịọrọ ya dị iche. Tupu Teen Me hụrụ nwoke dị ka a ogologo anụ; anụ ọhịa ahụ na wụsịrị zitere Satan-ekwu anyị. Ozugbo, na na barnyard, anyị n'obi n'ezie chere na ndụ anyị nọ ná nsogbu. M na-ele ndị ọzọ nke ihe nkiri dị ka a na-amakwa jijiji kpọkara akpọka.
Ụbọchị ndị a, mgbe ndị mmadụ jụrụ m otú mbụ ghọrọ ndị nwere mmasị na fim, M na-enye egwu na fim dị ka ọnụ ụzọ ámá ọgwụ. Horror fim ẹkenam m ọrụ David Cronenberg na Stanley Kubrick ma si n'ebe ahụ ka Dario Argento, Georges Franju na psychological dịkarịsịrị omimi nke European arthouse. Na ihe nile nke a bụ eziokwu. Ma The Texas Chainsaw igbuchapu bụ dị iche iche: ọ bụ a bumbling nwata trauma, reconstructed na anụ nko na mallets. Na ma eleghị anya nke ahụ bụ ihe banyere nile na nwata n'ụjọ. Ị nwere ike ima elu nsu, agba ọsọ ọhịa na-akwụ gị akpa uwe ego dị ka forfeit. Ma ị nwere ike mgbe outpace ha. Ị na-ebu ha na gị na azụ, nri site ịghọ okenye, na ihe nile ọ na-ewe bụ a film na-echetara gị. Ọ bụ ya mere The Texas Chainsaw igbuchapu ka spooks m taa. Proust nwere ya Madeleine, M nwere m eji ígwè ọnụ ụzọ.
More si The film na-emenyekwa m ụjọ kasị
Peter Kimpton n'elu mbadamba ihe
Peter Bradshaw on Eri
Sian Cain on The Nke isii Sense